Noma yimuphi umama okhulelwe, ngisho noma yena ayisekho ngisho ukuza lokuzalwa lokuqala, kuncike ukwesaba ezithile ezihambisana nokukhulelwa, futhi ikakhulukazi uma edonsa esiswini.
Njengomthetho, abesifazane abaningi ngesikhathi "ezithakazelisayo" isikhundla uyagijima buthule futhi ngaphandle nanoma yiziphi izinkinga, ngaphandle kokudala thuthuva ezingadingekile. Kodwa nokho, uma owesifazane okhulelwe udonsa esiswini, kungase eyabonisa izinkinga abalulekile emzimbeni, imbangela okuyinto edingekayo ukuze uthole ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Ukuze senyanga yokukhulelwa ngamunye kungenzeka ukuba izinhlobo zalo ubuhlungu obukhulu, futhi kuwo wonke umuntu - isizathu nesenzakalo yabo. Evamile, ubuhlungu sehlukaniswe enobungozi kanye non-enobungozi. Ngokuba non-enobungozi zihlanganisa lezi zinhlobo zamatshe ubuhlungu esiswini, okuyinto musa ziyingozi unina esizayo futhi sombungu. Kungenzeka colic esiswini, lapho kungenzeka kunoma imuphi umuntu kanti ngokuphelele ibukeke zibe ezingekho okuhlala. Ngokuvamile ihlobenenamanye ukudla, okuyinto ethathwa kwabesifazane abakhulelwe. Uma ukudonsa esiswini, kodwa ubuhlungu akulutho, lingasuswa phansi embundwini ubuhlungu ukuzwela, lapho umntwana esiswini iqala ukuhambisa. Kwezinye izimo, kudingeka uye kudokotela uyofuna icebiso.
Kunezindlela eziningana izifo ngesikhathi sokukhulelwa, ephelezelwa ubuhlungu, ukwazi wabo kumelwe.
Uma ukudonsa esiswini ngakwesokudla, futhi, ngokuvamile, umzimba akalushongo iyiphi kwezinso, akudingeki endaweni engayodwa, kungase appendicitis. Kulokhu, owesifazane okhulelweyo uzodinga ukunakekela kokulashwa okusheshayo futhi abaneziqu zemfundo emikhakheni (kuhlinzwa). Lolu uhlobo oluvame kakhulu ubuhlungu, owenziwe waba owasendaweni komgodi ongaphakathi kwamathumbu ngezansi. Ukubambezeleka okuncane kungase abulala izingane ongakazalwa.
Uma ukudonsa esiswini nobuhlungu ngesikhathi esifanayo ephelezelwa ukukhululwa wegazi (isitho sangasese somuntu wesifazane), imbangela kungase kube ezisengozini kwesisu isisu noma (nokuguqulwa). Lena isimo esiyingozi ngokwedlulele edinga usizo kokulashwa okusheshayo. Kungenjalo, ukukhulelwa akunakwenzeka ukuba ugcine.
Foci ukuvuvukala e insikazi Izitho zokuzala (amashubhu Fallopian, amaqanda) nalo ephelezelwa emizweni ubuhlungu uketshezi ezihambisana (ubovu) kanye lokushisa eliphakeme.
Uma ukudonsa esiswini, futhi lo muzwa idluliselwa ku esifundeni lumbar nokuthumba owesifazane owayezithwele, kukhona ukopha futhi kwandisa umsebenzi ingane ikusasa, lokhu usongo beqonda General ngaphambi kwesikhathi ebesibekiwe (ngaphambi kwesikhathi). Ngenxa ukushuba ukuthuthukiswa lolu hlobo isifo, futhi okubaluleke kakhulu kudinga usizo lwezokwelapha ngokushesha.
Ubuhlungu esiswini (edonsa, gqwa), ephelezelwa lube buthaka jikelele zomzimba, isicanucanu, isiyezi kanye nomlomo owomile kungaba izimpawu of abruption esinomhlapho.
Imbangela ubuhlungu kule aphansi esiswini sikamama okhulelwe kungaba enyelisa futhi imisipha. Iqiniso ukuthi zinwetshwe ngenxa yokwanda kwesibeletho, okusekelwa nemisipha kanye nemisipha. Lezi ubuhlungu yesikhashana, kodwa bangaba mkhulu phakathi kokuvivinya umzimba, kakhulu uma sezidla nangaphezulu yamandla aphindeke kabili. Abakwazi kubangelwe ukungezwani ngokweqile esiswini, ukukhwehlela eqinile. Ukuze yobuhlungu ukwelashwa okukhethekile uhlobo enjalo, ngokuvamile, ubizwa ayizange inikezwe. Engingakusho nje uhlele ukuphumula gqwa silondoloze ukuthula, impilo elokuthula ngaphandle kokukhathazeka. ukuphila obusebenzayo Kulokhu akwamukeleki.
Kungakhathaliseki ukuthi ubuhlungu esiswini kungadalwa okhulelwe kubalulekile ukwazi ngesikhathi esifanele futhi ngokwanele ukuhlola isimo sayo futhi ukuxilonga izifo ngendlela efanele. Futhi ungenza Uchwepheshe omuhle. Futhi uma bayayazisa impilo yakho kanye nempilo ingane yakho engakazalwa, ukubonakaliswa yokuqala ubuhlungu, ikakhulukazi lapho esiswini, ngokushesha xhumana nodokotela wakho. Mpilonhle kuwe nothandekayo wakho kancane!
Yini kungadalwa ubuhlungu besifuba phakathi kwesifuba?
Ingabe kungenzeka ukwelapha prostatitis okungamahlalakhona? Indlela ukwelapha prostatitis ezingamahlalakhona ekhaya?
Indlela ukubhaka croissants ikhaya
King Street, noma Ngobani izigilamkhuba
Imfundiso yokuziphendukela ukwahlukaniswa kwamandla, noma ilawulwa intando yeningi luyasetshenziswa